Farriinta Degdegga ah ee CDC ee loogu Talagalay Dadka Mareykanka ah: Tallaalka Booster
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Farriinta Degdegga ah ee CDC ee loogu Talagalay Dadka Mareykanka ah: Tallaalka Booster
Caafimaadka Warka • LGBTQ • News • Wararka Mareykanka
14 milyan oo qof oo ku nool Mareykanka oo qaatay tallaalka Johnson iyo Johnson ayaa dareemay in la ilaaway oo gadaal laga keenay. Maanta tan ayaa laga yaabaa inay wax iska beddeshay iyada oo la sugayey tallaalka xoojinta ee dhammaan 18 sano jirka.
CDC, The Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada gudaha Mareykanka wuxuu soo saaray tilmaamo sax ah oo loogu talagalay dadka Mareykanka ah iyo farriin deg deg ah goorta la qaadanayo tallaalka xoojiyaha saddexaad 3 toddobaad ka hor
Waxaa muhiim ah in la fahmo qiyaasaha koowaad iyo labaad ee tallaalka COVID-19 oo ka horreeya tallaal kasta oo xoojiya
Maanta guddi khubaro dibedda ah ayaa Jimcihii kula taliyay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka inay oggolaadaan qaddarka xoojinta tallaalka coronavirus Johnson & Johnson ee dadka 18 iyo ka weyn.
Waaxda Caafimaadka ee 50-ka Dawladood ee Mareykanka waxay abuurayaan nuqul u gaar ah macluumaadka asalka ah iyo talo soo jeedinta, taasoo ka dhigaysa arrinta oo dhan mid adag marmarka qaarkoodna jahawareer
Tallaalka koowaad, laba-tallaalka COVID-19 ee Pfizer iyo Moderna wuxuu bixiyaa difaac aad u wanaagsan oo ka dhan ah astaamaha daran, isbitaal dhigidda, iyo dhimashada. Qiyaasaha koowaad iyo labaad ee tallaalka waa inay ka hormaraan wax kasta oo qaadasho xoojin ah. Habka ugu wanaagsan ee loo badbaadin karo qoysaska iyo bulshooyinka ayaa ah in la hubiyo in degganeyaasha aan la tallaalin ay dhammaystiraan taxanaha tallaalka asaasiga ah.
Tallaal xoojin ah oo Pfizer ayaa hadda lagula talinayaa kooxaha mudnaanta gaarka ah leh si loo kordhiyo jawaab-celinta difaaca ee COVID-19 iyo in laga ilaaliyo ka-hortagga cudurka, oo ay ku jiraan kala duwanaanshaha Delta.
Maxaad u tixgelinaysaa xoojiye?
Tallaallada COVID-19 ayaa weli ah aaladda ugu waxtarka badan ee looga hortago jirro daran, isbitaal dhigid, iyo geeri, oo ay ku jirto ka-hortagga kala duwanaanshaha Delta ee baahsan.
Si kastaba ha noqotee, daraasado ay dib u eegeen Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) ayaa muujinaya ka dib markii si buuxda loo tallaaley, ka-hortagga fayraska sababa COVID-19 inuu yaraado waqti ka dib wuxuuna siiyaa difaac yar ka-duwanaanshaha Delta.
Yay tahay in la siiyo tallaalka xoojiyaha?
Shakhsiyaadka qaarkood ayaa halis dheeraad ah ugu jira caabuq ama jirro daran oo ka timaadda COVID-19 sababtuna waa da'dooda, xaalado caafimaad oo hoose, ama sababta oo ah waxay ku nool yihiin ama ka shaqeeyaan meel u dhow kuwa kale taas oo gelisay halis dheeraad ah oo ah soo-gaadhista ama gudbinta.
CDC waxay si xoog leh ugu talisay dhiirrigeliyeyaasha in la siiyo dadka waaweyn ee jira 65 sano iyo ka weyn iyo kuwa jira 50 illaa 64 oo leh xaalado caafimaad oo hoose sababta oo ah ka -hortagga ka -hortagga kooxahan ayaa iyaga gelisa halista ugu sarreysa ee jirro daran. Sidaa darteed, Waaxda Caafimaadka ee gobolo badan waxay ku talisay in bixiyeyaasha daryeelka caafimaad ay mudnaanta siiyaan kooxahan.
Markay sahayda dhiirrigeliyayaashu oggolaato, CDC waxay u soo jeedin doontaa talooyin kooxo dheeri ah, oo ay ku jiraan dadka waaweyn ee jira 18 illaa 49 oo leh xaalado caafimaad oo hoose oo ku saleysan faa'iidooyinka iyo halista shaqsi kasta, iyo dadka waaweyn ee jira 18 ilaa 64 ee khatarta sare ugu jira xirfadaha ama hay'adaha soo -gaadhista, oo ku salaysan faa'iidooyinka iyo halista qof kasta.
Sida ay dadka deegaanku ugu dulqaateen sugitaankooda markii tallaallada COVID-19 markii ugu horreysay la diyaariyey waa inaan dhammaanteen muujinnaa aloha oo hubi in kooxaha mudnaanta leh ee loo qoondeeyey ay marka hore helaan xoojintooda, waa qayb ka mid ah tilmaamaha la siiyo dadka deggan Gobolka Hawaii.
Dhiirrigeliyaha Pfizer waxaa kaliya loogu talagalay kuwa qaatay tallaalka Pfizer; laguma talinayo kuwa qaatay tallaalka Moderna ama Johnson & Johnson.
Tallaallada Moderna iyo Johnson & Johnson ayaa dib -u -eegis lagu samaynayaa qiyaaso xoojiyahooda ah iyo kuwa lagu tallaalay mid ka mid ah tallaalladan waa inay sugaan inta FDA iyo CDC labaduba soo saaraan talooyinkooda. Marxaladda koowaad ee taladan ayaa mar hore la soo gabagabeeyay waxayna sugaysaa ogeysiisyo rasmi ah.
Goorma ayay tahay inaad hesho xoojiye?
Waqtiga hadda lagu taliyay ee xoojiyaha Pfizer waa lix bilood kadib markaad dhammaysato labada tallaal ee hore. Xog laga helay tijaabo caafimaad ayaa muujisay in tallaalka xoojiyaha ee Pfizer-BioNTech, oo loo oggolaaday adeegsiga Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka, ay muujineyso inay jirto jawaab-celin difaac oo ka-qaybgalayaasha tijaabada ah oo dhammaystay taxaddarkooda tallaalka Pfizer laba-xabbadood lix bilood hore.
Tallaallada xoojiyaha Tallaalka ee OVID-19 ayaa loo heli karaa kuwa soo socda ee qaata tallaalka Pfizer-BioNTech kuwaas oo dhammaystiray taxanahoodii hore ugu yaraan 6 bilood ka hor waana:
Da'da 18+ ee ka shaqeeya goobaha khatarta sare leh
Da'da 18+ ee ku nool goobaha khatarta sare leh